Manjaro 2021-08-09 inosvika nePlasma 5.22.4 uye PulseAudio 15.0 | Linux Vakapindwa muropa
Ngatiitei chimwe chinhu chijeke: kunyange izvi zvakatoitika mu previous version, kwete, Manjaro haichengete vashandisi veKDE zvekare. Izvo zvinoitika ndezvekuti KDE Nharaunda inovandudza software yayo kazhinji, senge KDE Gear kamwe pamwedzi kana Plasma, iyo inoburitsa mavambo ekutanga emavhezheni mumasvondo matatu akateedzana. Izvo zvakati, nhasi ndinoziva akakanda manjaro 2021-08-09, vhezheni itsva yakagadzika iyo ichave iri nani kune vashandisi veiyi yepamutemo vhezheni.
Kubva pakuburitswa izvi zvinomira pachena kuti iyo KDE edition yagamuchira Plasma 5.22.4, inowanikwa pa KDE neon uye Kubuntu + Backports kubva muna Chikunguru 27. Kana zviri zvekuvandudzwa kwese, ndiko kuti, kune zvese zvinonaka, zvakare inoratidza kusvika kwePulseAudio 15.0 kana PipeWire 0.3.33. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko avakatipa mune yavo yepamutemo foramu.
Manjaro anoratidza 2021-08-09
Dzimwe dzenzara dzakagadziridzwa. Uye pano ivo vanoyeuchidza zvakare kuti iyo 5.12 nhepfenyuro inoiswa mucherechedzo seEOL, zvinoreva kuti haizovandudzwe futi, uyezve, inozoburitswa kune chero zvikanganiso zvekuchengetedza zvinowanikwa.
Xorg-Server 1.20.13 ine zvigadziriso zvakatotumirwa zviri pamutemo.
Mesa ikozvino yave pa21.1.6.
Virtualbox ikozvino yave pa6.1.26.
PulseAudio yakagadziridzwa kuita vhezheni 15.0, iyo inounza kuvandudzwa kweBluetooth.
Plasma yakagadziridzwa kuita 5.22.4.
Pipewire ikozvino yava pa0.3.33.
Zvimwe zvenguva dzose zvekuvandudza zvinyorwa
Manjaro 2021-08-09 ndeye shanduro yakagadzikana, uye kuverenga kwayo kunoenderana nezuva ravakatangwa. Haisi iyo ISO nyowani, asi mapakeji ayo anoonekwa seyekuvandudzwa pane zviripo kuiswa. Iyo yazvino ISO ichiri v21.0.7, uye kubva pakuonekwa kwayo hakuna kumbove nechero zvitsva kubvira ipapo nekuti vane bhagi rekugadzirisa. Ivo parizvino vari kuburitsa Manjaro 21.1 RCs, unova mufananidzo wekutanga kushandisa GNOME 40 pabazi rakagadzikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Manjaro 2021-08-09 yakanyanya kukosha kune vashandisi ve KDE, inosvika nePlasma 5.22.4 uye PulseAudio 15.0
Zorin OS Pro, iro zita idzva reiyo Yekupedzisira edition yevanonyanya kuda vashandisi nemakambani
Iye zvino yave kuwanikwa iyo nyowani vhezheni yeOPNsense 21.7 "Noble Nightingale"